မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXIV | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXIV	1
—— ၁၂၊ မိုးနဲမယ်၊ဟိမဝန္တာ ရေခဲတုံးသေးသွားလို့ရေပြေါ်လာမှာကနဲမယ်လို့ပညာရှင်တွေပြေါကြောင်း
ဆရာကြီးကကိုးကားပြီး ရေကာတာတွေ လုံးဝရပ်ဘို့ဆိုပါတယ်၊ ရှေ့ဆောင်းပါးကတင်ပြခဲ့သလို
ပညာရှင်အကျော်အမော်တွေကနောင်ကြိမ်ထိုးနေကြလို့ မြစ်ရေနဲမဲ့ကိစ္စကိုက တပ်အပ်သေချာပါ့
မ လား ပါ? ——
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ဆရာကြီးက ကမ္ဘာ့ရာသီပူနွေးမှုအကြောင်ကို စင်ကာပူမှာ ဟောခဲ့တယ်၊
ဒီကဆန့်ကျင်စောဒကတက်တဲ့ ဆောင်းပါးလိုတွေ့ကောင်းပါတယ်၊ဒီဆောင်းပါးကို မေလ၂၀၀၈ ကထဲကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်၊——
Science no longer provides justification for any rush to pass drastic global warming legislation. (မရေရာ မသေချာ အငြင်းပွါးနေလို့)ကမ္ဘာ့ပူနွေးမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေကိုထုတ်လောက်အောင် သိပ္ပံပညာကိုအခြေ၊မခံ
Pressure to pass impossible-to-achieve legislation, like Lieberman-Warner, or grandstanding political stunts, like calling polar bears an “endangered species” even when they are at near record-high population levels, are based upon projections of rapid and persistent global warming. ———–
( ကာဘွန်ဒိုင်အောက်စိုဒ် က အပူရှိန် ကိုမှန်းထားသလောက် အပူမပေးပါ၊)
( သိပ္ပံ ပညာ ထက် နာက်ကွယ်ရာမှာ “နိုင်ငံရေး ပါနေတာ” ကအမှန်)၊
ဆရာတို့ ၂၀၁၁ ကပြေါသလို ဧရာဝတီမြစ်ရေနဲမယ် ဆိုရင် ခုကျတော့ မ နဲတဲ့အပြင်
မြစ်ကြီးနားတဝှိုက် နှစ်စဉ်ရေကြီးပြီး တချို့နေရာကတောင် ဒူးခေါင်းထိဆိုဘဲ၊ မိုးနဲမယ်၊ ရေခဲပြေါတာ နဲ လို့ရေနဲသွားမယ် ဆိုတဲ့အလှန့်တကြား ဟောကိန်းနဲ့
ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲ၊မမှားတဲ့ရှေ့နေ၊ မသေတဲ့ဆေးသမားဆိုရိုးရှိတယ်မဟုတ်လား ၊